Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra tamin’ny 2019 June 02
02 Jona 2019
Febroary 2020 45 Lahatsoratra
Tantara tamin'ny 02 Jona 2019
Mitady Talen'ny Advocacy ny Global Voices mba hitarika ny tatitra, ny fikatrohana ary ny fikarohana momba ny fahalalaham-pitenenana sy ny sehatry ny zo nomerika.
Bilaogy Kiswahili: Tsy manana anarana ny ankamaroan'ny lalana an-tanandehibe tanzaniana… (2005)
Ahitana tantara hafa ihany koa Nanao dikan-teny mahafinaritra tamin'ny teorian'ny ady saranga nosoratan'i Karl Marx i Gaphiz. Mandray ny Fanambaràn'i Arusha ho ohatra iray tamin'ny niasan'i Karl Marx izy.
Bilaogy Kenyana: Noroahin'i Kibaki daholo ny minisitra rehetra (2005)
Mpanoratra Juliana Rotich · Afrika Mainty
Natsangana vao haingana ny Kenyan Open blog, ny hevitra ambadik'izany dia ny mba "ahafahana manara-maso sy mamantatra ireo lohahevitra manan-danja eo amin'ny tontolon'ny bilaogy Kenyana na iadian-kevitra ao amin'ny tontolon'ny bilaogy Kenyana midadasika."
Mpanoratra Maurina H · Azia Atsinanana
(Fanamarihana. lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Aogositra 2006) Heveriko fa misy ny rindrina tsy hita maso ‘tsy ofisialy’ apetraka ho an'ireo vehivavy manamboninahitra. Ry zareo lehilahy no mibahana ny ankamaroan'ireo toerana ambony ao anivon'ny fiarahamonina ao Brunei. Mety ho anton'ny fisian'ny tsy fifandanjàna ve ny hoe satria ireny olona ireny ihany...